"Tsofy ao Ziona ny anjomara! Ary miantsoa mafy ao an-tendrombohitro masina! Aoka hangovitra ny mponina rehetra amin'ny tany; Fa avy ny andron'i Jehôvah, eny, efa antomotra izany." — Joe. 2:1.
Izay zavatra mahasoa ny mandrakizaintsika no tokony hifantohan'ny saintsika ankehitriny. Tsy azontsika atao ny manao ambanin-javatra ny zava-panahy. Efa mihatra amin'ny tany ny fitsaran'Andriamanitra. Milaza fampitandremana izany manao hoe: "Koa miomàna kosa hianareo; fa amin'izay ora tsy ampoizinareo no hihavian'ny Zanak'olona."
Kanefa mbola vitsy dia vitsy ao amin'ny fiangonantsika no mahafantatra tsara ny tena hevitry ny fahamarinana ankehitriny. Miangavy azy ireny aho mba tsy hanao tsinontsinona ny fahatanterahan'ireo famantarana ny fotoana, izay manambara mazava fa efa akaiky ny farany. Ho maro amin'ireo izay tsy nihevitra ny famonjena ny fanahiny no hilaza izao fitomaniana mangidy izao: "lasa ny fararano, tapitra ny taom-piotazana, nefa tsy voavonjy isika."
Efa miaina ireo tranga faran'ny tantaran'ity tany ity isika ankehitriny. Tanteraka haingana ny faminaniana. Efa hifarana tsy ho ela ny fotoam-pahasoavana. Tsy manam-potoana holaniana intsony isika na kely monja aza. Andeha hiambina ka tsy hatory. Aoka tsy hisy hilaza ao am-pony hoe: "maharitra ela ny Tompoko". Aoka horaisina ho toy ny teny fampitandremana mahatahotra ny hafatry ny fiavian'i Kristy fanindroany. Andeha horesentsika lahatra ny lehilahy sy ny vehivavy amin'ny toerana rehetra fa tsy maintsy mibebaka izy ireo ka hanalavitra ny fahatezerana ho avy. Aoka izy ireo hiomana haingana, satria tsy fantatsika izay mety hitranga. Aoka ny mpitory teny sy ny mambran'ny fiangonana hiasa amin'ireo rehetra tsy miahiahy sy tsy miraika mba hikatsaka ny Tompo dieny mbola hita Izy.
Tsy ho ela intsony dia ho avy ny Tompo, ary tsy maintsy miomana hitsena Azy amim-piadanana isika. (...) Tsy tokony halahelo isika, fa ho faly, hisaintsaina isan'andro an'i Jesôsy. Ho avy faingana Izy, ary tsy maintsy vonona sy miandry ny fisehoany isika. Voninahitra manao ahoana re ny hahita Azy sy ny horaisiny ho isan'ireo olom-bonjeny! Niandry ela isika, kanefa tsy foana ny fanantenantsika. Raha azontsika atao ny mahita ny Mpanjaka ao amin'ny hatsarany, dia ho voatahy mandrakizay isika. Te hiantso mafy aho hoe: "andao hody amin'izay!" Manakaiky ny fotoana hiverenan'i Kristy amin-kery sy voninahitra lehibe mba handray ireo voavotra ho ao amin'ilay fitoerana maharitra mandrakizay. — RH, 14 Jolay 1903.